रेखा हराउँदा करिश्मा मालामाल ! यस्तो छ बाबुरामसँग हात मिलाउनुको रहस्य - Enepalese.com
रेखा हराउँदा करिश्मा मालामाल ! यस्तो छ बाबुरामसँग हात मिलाउनुको रहस्य
इनेप्लिज २०७२ माघ ११ गते ७:०४ मा प्रकाशित
काठमाडौं, १० माघ । नेपाली रजतपटकी चल्तिकी नायिका रेखा थापा राजनीतिमा प्रवेश गरेर फेरि एकाएक हराएकी छिन् । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भद्रकाली मन्दिर अगाडि कम्मर मर्काइमर्काइ नाचेकी रेखा यति उत्साहित भइन कि त्यसको केही समयभित्रै एमाओवादीमा प्रवेश गरिन् ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हातको टीका लगाएर पेरिशडाँडामा तामझामका साथ सदस्यता लिइन् । सदस्यता लिएको केही समय त उनको एमाओवादीका राजनीतिक कार्यक्रमहरुमा चुरिफुरी पनि खुब भयो । उनले प्रत्यक्षमा चुनाव लड्नका लागि टिकट पनि पाइन् । बिडम्बना उनको भेट लिष्टमा नामै रहेनछ ।
बाबुरामसँग धेरै आश गरेकी करिश्माले कति कलाकारलाई आफ्नो नयाँशक्ति अभियानमा ल्याउने हुन् उनको परीक्षण पनि हुनै बाँकी छ ।
आफ्नो नाम भोट लिष्टमा छ कि छैन ? म कुन हैसियतको व्यक्ति हुँ ? मैले के गर्दा उचित हुन्छ भन्ने भेउ नपाउने रेखा अहिले एमाओवादीको राजनीतिबाट पलायन सरह छिन् । एमाओवादीको नेता हुन् कि होइनन् रेखाले अहिलेसम्म केही बताएकी छैनन् । तर उनलाई एमाओवादीकाले राजनीतिले फाइदाभन्दा पनि बेफाइदा धेरै भएको आफू निकटका कलाकार साथीहरुसँग गुनासो गर्ने गरेकी छिन् ।
अहिलेफेरि तिनै रेखालाई बिर्साउने गरी पुरानी अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरको चर्चा हुन थालेको छ । आइतबार काठमाडौंको बुद्धनगरमा एमाओवादीका पूर्व नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग कुम जोडेर (नजिकै) बसेकी करिश्माको चर्चा चुलिएको छ ।
अमेरिकाको लामो बसाइपछि पति विनोद मानन्धरसँग ललितपुरमा व्यवस्थित घरजम गरेर बसेकी करिश्मा बाबुरामको नयाँशक्तिको अभियन्ता बनेकी छिन् । उनले नयाँशक्तिमा लागेर राम्रै फड्को मार्ने सोँच बनाएकी छिन् ।
अभिनयमा अब्बल मानिने करिश्माको राजनीतिक गतिविधि कस्तो हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ । तर उनले रेखा थापाले जस्तो बाबुरामसँग सार्वजनिक कार्यक्रममा कम्मर मर्काइ मर्काइ नाच्नु भने परेको छैन । नयाँशक्ति भएको कारणले पनि करिश्मालाई रेखाको जस्तो परीक्षण दिन नपरेको हुन सक्छ ।
बाबुरामको नयाँशक्तिका अनुहारमध्ये करिश्माको अनुहार पनि राजनीतिका लागि नयाँ हो । यो नयाँ अनुहारबाट बाबुरामले ठूलै आश बोकेका छन् । उनको टिममा राम्रो स्थान पाएकी करिश्माको करिश्मा भावी दिनमा पक्कै देखिनेछ । रेखा थापाको अवस्था भने पक्कै हुने छैन होला ?
स्रोतका अनुसार बाबुरामसँग लाग्दा छिट्टै माथिल्लो पदमा पुगिने लालच नयाँ शक्तिले देखाउँदा उनी राजनीतिमा लोभिएकी हुन् ।
बाबुरामसँग धेरै आश गरेकी करिश्माले कति कलाकारलाई आफ्नो नयाँशक्ति अभियानमा ल्याउने हुन् उनको परीक्षण पनि हुनै बाँकी छ । बाबुराम जस्ता व्यक्तिसँग उनलाई काम गर्न सहज भने हुने छैन । क्यामराको अगाडि एक्सन, कटमा रमाएकी करिश्माले जीवनको उत्तरार्द्धमा रोको बाबुरामको नयाँशक्ति अभियानले के कति फाइदा होला त्यो भने भविष्यमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
1 Clever Trick To Pay $0 On Your Credit Card Balances For The Rest Of 2016
Ron Paul Expects Big Changes Coming For Retirees
Fact: Credit Reports are Critical to Improve Your Credit Score
A WWII Story Energy Investors Should Read
One Comment on “रेखा हराउँदा करिश्मा मालामाल ! यस्तो छ बाबुरामसँग हात मिलाउनुको रहस्य”
B Raj Neupane wrote on 25 January, 2016, 0:13
सार्वभौम सत्ता सम्म्पन्न जनता हुन यदी नेपाली जनताले चाहे भने एकै दिनमा सत्ता, सरकार,ब्यवस्था,संविधान सम्पूर्ण परिवर्तन हुन सक्दछ ।जय राष्ट्र ।
दुर्घटनामा परी युवा मोडल ओलीको बुटबलमा मृत्यु (भिडियोसहित)
गायक विजय लामाको सातौं एल्बम ‘मेरो गीत’ बजारमा
पोर्नस्टार भन्दा कम छैनन् तिर्सना, नपत्याए हेर्नुस् निवस्त्र अवतार
भूकम्प पीडितलाई मुन्द्रेको न्यानो कोसेली
प्रधानमन्त्री ओलीले रातारात यी हिरोइनलाई पठाए ठूलै पत्र, के छ पत्रमा ?
गायिका देविका केसीको चर्चित गीत ‘घुम्रेको केशै राम्रो हो’ बजारमा (हेर्नुस् भिडियो)
मधेस आन्दोलनबारे ज्योतिषको नयाँ भविष्यवाणी !
नेपाली सेनाले खोल्यो जागिर, अब उमेर हद नलाग्ने !
नेपाललाई चीनले सहयोग गर्नुको रहस्य खुल्यो, चीनको पनि आफ्नै स्वार्थ !
बाबुरामको नयाँ शक्तिको राष्ट्रिय परिषद् घोषणा, यस्ता छन् चर्चित अनुहार (नामावलीसहित)
काठमाडौं, १० माघ । नयाँ शक्ति नेपालको राष्ट्रिय परिषद घोषणा भएको छ । आइतबार राजधानीको बुद्धनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी संयोजक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले…
संशोधन भएपछि भारतले पहिलोपटक गर्‍यो नेपालको नयाँ संविधानको स्वागत
प्रचण्डलाई हराउने राजन केसी कता हराए ?
भारतीय नाकाबन्दीको निगरानी गरिरहेका छौं: अमेरिकी नेता कोनोली
प्रचण्ड भन्छन्- हामीले गल्ति गर्‍यौँ
– विमल योगी काठमाडौं, १० माघ । नेपाली रजतपटकी चल्तिकी नायिका रेखा थापा राजनीतिमा प्रवेश गरेर फेरि एकाएक हराएकी छिन् । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका…
चाणक्य नीतिअनुसार यी युवतीसँग कहिल्यै नगर्नुस् विहे, नत्र जीवन बर्बाद हुनेछ !
काठमाडौं । विवाहलाई सात जूनीसम्मको सम्बन्ध मानिन्छ । उसो त विहे भनेको एक आपसमा समाहित हुने र जीवनभरी एकसाथ रहने बन्धन हो । यसलाई जीवनकै सबैभन्दा…
नेपालबाट पक्रेर भारतीय जेलमा यौनसम्पर्क !
उच्चस्तरीय सरकारी बैठकमा पोर्न भिडियो हेर्दाहेर्दै आयल निगमका हाकिम पक्राउ !
श्रीमानले लिएको ऋणको बदलामा श्रीमतीसँग यौनसम्पर्क !
विवाहित महिलाले आफ्नो नग्न फोटो परपुरुषलाई पठाएपछि…
प्रेमिकाको इच्छा पुरा गर्न यस्तोसम्म गरेपछि…